တရုတ်ပလတ်စတစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက်, Automatic ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Roll အလျားလိုက်အပေါက်စက်, ပလတ်စတစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Slittng စက်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက်,ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက်,အလိုအလျောက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက်,ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Roll အလျားလိုက်အပေါက်စက်,ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Slittng စက်,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လှီး Rewinding စက်စီးရီး > ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက်
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက်, ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အလိုအလျောက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့်လှိမ့်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့် rewinder စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပလတ်စတစ်ရုပ်ရှင်လှုပ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပလတ်စတစ်ရုပ်ရှင်အဝတ်ချွတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
FRICTION SHAFT နှင့်အတူ LLDPE ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Corona ကုသမှု GFTW-1500C ဖြင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင် Slittng Machinery  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OPP CPP က Ffilm Slitter နှင့်ပြန်ရစ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြန်ရစ်ကြည့်စက်ယန္တရား slitting လှိမ့်မှ roll  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Automatica အလျားလိုက်အပေါက်စက်ကိရိယာများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူအလျားလိုက်အပေါက်စက် slitters  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရုပ်ရှင်အဘို့စီးပွားရေး Slitter ပြန်ရစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်ပွဲတော် slitter ပြန်ရစ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလျားလိုက်အပေါက်များနှင့်သင်တုန်းဓားနှင့်အတူစက်ပြန်ရစ်ကြည့်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်ပြန်ရစ်ကြည့်စတင်ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အလျားလိုက်အပေါက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အဂျမ်ဘိုအလျားလိုက်အပေါက်ပြန်ရစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရုပ်ရှင် 800mm အဘို့အ Slitter စက်စျေးနှုန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အလျားလိုက်အပေါက်နဲ့ပြန်ရစ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့် rewinder စက်
မြန်နှုန်းမြင့် rewinder စက် GHJ1000A အသုံးပြုခြင်း -...
ရုပ်ရှင်လှိမ့်သည့်စက် Rewinding Machine SHANTOU GHJ1200A1 အသုံးပြုခြင်း - ပလတ်စတစ်ဖလင်နောက်ကျောစက်သည်ပလတ်စတစ်အမျိုးပေါင်းအားလုံးကိုပြန်လှည့်ရန်သင့်တော်သည် အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ: 1) ။ ထိရောက်သောအကျယ်: 200-600mm 2) ။ လှည့်ပတ်အချင်း: φ700mm...
GHJ1100B ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်တပ်စက် ပလပ်စတစ်ဖလင်ဖြင့်ဖယ်ရှားသည့်စက်သည်အဓိကအားဖြင့် web metalized paper ကို transfer သို့မဟုတ် peeling ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် rewinding & slitting web သို့မဟုတ် roll roll paper ထုတ်လုပ်သည့်နည်းစနစ်များတွင်အသုံးပြုသည်။...
FRICTION SHAFT နှင့်အတူ LLDPE ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
FRICTION SHAFT GDFQ-1950 နှင့်အတူ LLDPE ကျိုးစက် FRICTION SHAFT နှင့်အတူ LLDPE SLITTING MACHINE သည်အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းတွင်မတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အတူအလွှာစုံပြားကိုအလွယ်တကူ ဖြတ်နိုင်သည့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။...
Corona ကုသမှု GFTW-1500C ဖြင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်စက် Corona ကုသမှုဖြင့်ရိုက်ကူးထားသော Slitting Machine တွင်အလယ်စက်နှင့်ဗဟို / မျက်နှာပြင်တပ်ကိရိယာများပါ ၀ င်သည်။ Corona ကုသမှုဖြင့်ရုပ်ရှင်ဖြတ်တောက်စက် ကျဉ်းမြောင်းသောအကျယ်ဖြတ်ရန်အတွက် duplex winders...
ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင် Slittng Machinery
ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင် Slittng စက် GFTW900A3 စက်လျှောက်လွှာ: က BOPP, PET, 0.012-0.12mm နှင့်အတူလေဆာပူစိုင်းသတ္တုပါးအဘို့အမြင့်မား pression...
OPP CPP ကရုပ်ရှင်ပွဲတော် Slitter နှင့်ပြန်ရစ်စက် GFTW900D3 စက်လျှောက်လွှာ: က Metal ရုပ်ရှင်, လေဆာရုပ်ရှင်, လွှဲပြောင်းရုပ်ရှင်, ဒါပေါ်မှာသတ္တုရုပ်ရှင်, အဖြူရောင်ရုပ်ရှင်, PET12-50μm.BOPP50-50μm.PVC20-50μm.CPP20-50μmလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ommon ကို C...
ပြန်ရစ်ကြည့်စက်ယန္တရား slitting လှိမ့်မှ roll
ပြန်ရစ်ကြည့်စက်ယန္တရား GFTW2600A slitting လှိမ့်မှ roll လျှောက်လွှာ: ပြန်ရစ်ကြည့်စက်ယန္တရား GFTW2600A slitting လှိမ့်မှ Roll သတ်မှတ်ထားသောသေးငယ်တဲ့လိပ်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသော width ကိုမှဂျမ်ဘိုလိပ် slitting သို့မဟုတ်ပြန်ရစ်ကြည့်အသုံးပြုသည်။...
Automatica အလျားလိုက်အပေါက်စက်ကိရိယာများ ရုပ်ရှင်အဘို့စီးပွားရေး Slitter ပြန်ရစ်အော်တိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်းမာမှု, taper တင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်ထား, အလယ်ဗဟိုပြန်ရစ်နှင့်တင်းမာမှုစက်ရပ်တန့်သည့်အခါ function ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းရှိသည်။ သင့်လျော်သောကြိုးသို့...
စက္ကူအလျားလိုက်အပေါက်စက် slitters GFTW1200D စက် Unwind စက်ရပ်တန့်တဲ့အခါမှာအလိုအလျှောက်စဉ်ဆက်မပြတ်တင်းမာမှု, taper တင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်ထား, အလယ်ဗဟိုပြန်ရစ်နှင့်တင်းမာမှု function ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းရှိသည်။ သင့်လျော်သောကြိုးသို့ Slitting,...
ရုပ်ရှင်အဘို့စီးပွားရေး Slitter ပြန်ရစ်
ရုပ်ရှင် GFTW1200A များအတွက်စီးပွားရေး Slitter ပြန်ရစ် ရုပ်ရှင်အဘို့စီးပွားရေး Slitter ပြန်ရစ်အော်တိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်းမာမှု, taper တင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်ထား, အလယ်ဗဟိုပြန်ရစ်နှင့်တင်းမာမှုစက်ရပ်တန့်သည့်အခါ function ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းရှိသည်။...
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်ပွဲတော် slitter ပြန်ရစ်စက်
Supply နိုင်ခြင်း: c100 SETS PER YEAR
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်ပွဲတော် slitter ပြန်ရစ်စက် GFTW2000C1 လျှောက်လွှာ Flexible ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်ပွဲတော် slitter ပြန်ရစ်စက်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်,...
အလျားလိုက်အပေါက်များနှင့်သင်တုန်းဓားနှင့်အတူစက်ပြန်ရစ်ကြည့် FT1600 လျှောက်လွှာ: ကဒါပေါ်မှာပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင် slitting များအတွက်သင့်လျော်သောအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့အလျားလိုက်အပေါက်စက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး, ပင်မနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameters များကို: 1) .Machine...
စက် GFTW-1200A ပြန်ရစ်ကြည့်စတင်ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အလျားလိုက်အပေါက် စတင်စက် GFTW-1200A ပြန်ရစ်ကြည့်ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အလျားလိုက်အပေါက်အလွန်အမင်းပေ, BOPP များအတွက်တိကျနဲ့အထိခိုက်မခံကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်,...
ရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အဂျမ်ဘိုအလျားလိုက်အပေါက်ပြန်ရစ် GFTW1200A2 လျှောက်လွှာ: ဂျမ်ဘိုအလျားလိုက်အပေါက်ပြန်ရစ်ရုပ်ရှင် GFTW1200A2 အမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အစက် slitting ၏ထူးခြားသော function ကိုအတွက် blended...
ရုပ်ရှင် 800mm အဘို့အ Slitter စက်စျေးနှုန်း
ရုပ်ရှင် 800mm GFTW-800A များအတွက် Slitter စက်စျေးနှုန်း လျှောက်လွှာ: GFTW-800A ဒါပေါ်မှာပစ္စည်း OPP, PET ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်နှင့် slitting အဘို့သင့်လျော်သည်ရုပ်ရှင် 800mm အဘို့အ Slitter စက်စျေးနှုန်း Max. Raw Material Unwind Diameter: ≤Φ800mm; Max....
ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အလျားလိုက်အပေါက်နဲ့ပြန်ရစ်စက် GFTW-650D လျှောက်လွှာ: ပလတ်စတစ်ရုပ်ရှင်အလျားလိုက်အပေါက်နဲ့ပြန်ရစ်စက်ပစ္စည်း OPP, PET ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်, အထူ 0.02-0.18mm slitting အဘို့သင့်လျော်သည် ပင်မနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameters များကို: 1)...
တရုတ်နိုင်ငံ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက် ပေးသွင်း
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက် (ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင် slittng စက်) သတ်မှတ်ထားသောသေးငယ်တဲ့လိပ်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသော width ကိုမှဂျမ်ဘိုလိပ် slitting သို့မဟုတ်ပြန်ရစ်ကြည့်အသုံးပြုသည်။
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက် ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက် အလိုအလျောက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက် ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Roll အလျားလိုက်အပေါက်စက် ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Slittng စက် ဖျင်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်စက် ပေရုပ်ရှင်ပွဲတော်အလျားလိုက်အပေါက်